शनिवार, कार्तिक ६, २०७८ ०७:५८:४७
दशै र तिहारमा घर फर्किने नेपालीहरुको सास्ती पाएको भित्रि कथा
मगलवार, आश्विन ३०, २०७५ नवराज महतारा
दशै र तिहारको अवसरमा भारतबाट घर फर्किदै नेपाली भारत र नेपालको जमुनाह नाकाको रुपैडियामा
नवराज महतारा, नेपालगञ्ज । लद्दाकबाट बिहानै (मंगलबार) साढे ६ बजे रुपैडिया उत्रेका चन्दनाथ ३ जुम्लाका विष्णु भण्डारीले रुपैडिया वसपार्क देखि २ सय मिटर नपुग्दै २ सय ५० भारु तिरे । ३ बोरा सामान ल्याएका भण्डारीलाई आफुले तिरेको पैशा के को लागि हो भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन् ।
सार्वजनिक बसमा रुपैडिया पुगेका उनलाई सामान सहित नेपालगञ्ज वसपार्क पुर्याईदिने भन्दै भारतीय अटोरिक्समा जर्वजस्त राखियो तर सिमाना नपुग्दै अर्को रिक्सामा जानु भन्दै रिक्सा चालकले भारु २ सय ५० लगेपछि उनी छाँगाबाट खसेझै भए । रुपैडियाको चोकबाट फेरी अर्को अटोरिक्सामा चढेका भण्डारीले ५० मिटर नकाट्दैं भारतिय कष्टमको नाममा नेपाली १ सय ५० रुपैयाँ तिरे । त्यसको १० मिटरमा पोसाक सहित हातमा लट्ठी बोकेर उभिएका एसएसवीका सुरक्षाकर्मीले हैरानी पारेपछि फेरी नेपाली १ सय ५० रुपैयाँ तिर्नु पर्यो ।
दशैको अवसरमा घर परिवारलाई लुगाफाटो ल्याएर २ महिना पछि फर्किएका दैलेखका जगदिस विकले रुपैडिया वसपार्क देखि नेपालगञ्ज वसपार्क सम्म पुग्दा विभिन्न ठाउँमा चिया खर्च भन्दै ४ सय ५० तिर्नु पर्यो । श्रीमती, छोरा सहित ७ जनाको समुहमा आएका विकलाई भारतीय कष्टम र सिमा सुरक्षा वल एसएसीले हैरानी पारेपछि उत्त रकम तिर्नु पर्ने बाध्यता भयो ।
दशै र तिहारको अवसरमा भारतबाट घर फर्किदै नेपालीहरुलाई चेकजाँच गर्दै सिमा सुरक्षा व्रहरी बलका अधिकारी भारत र नेपालको जमुनाह नाकाको रुपैडियामा
भातीय कष्टम र एसएसवीले सामान खोलेर निकै हैरानी पारको बताएका विकले भने “हातमा लट्ठी समातेर बसेका एसएसवी र कष्टमका कर्मचारीले अनावश्यक खोजतलास गर्दै अपशब्दमा गाली गरे । यसरी गाली गर्ने मैले त्यस्तो केही बोकेको छैन्, किन गाल दिएको के मात्रै भन्न भ्याएको थिए म माथि हातपातै भयो ।” नेपालगञ्ज वसपार्कको एक होटेलमा निकै भावुक मुद्रामा भेटिएका विकले थपे “बिहान नेपालीको आवतजावत पनी कम हुँदो रहेछ । उनीहरुको आरोपमा नडराएर मैले प्रतिकार गरेपछि साला... कालिपहाडेलाई भित्र (ठानामा) ले ! भन्दै हातपात गरे ।
ठानामा लिए धेरै कुटपिट गर्छन र आफूसँग भएका पैशा समेत लुट्ने गर्छन भन्ने कुरा सुनेकोले मनमनै निकै डरपनि लाग्यो । उनीहरुले म माथि हातपात गर्न थालेको देखेर सँगै भएकी मेरी श्रीमती र छोराछोरी पनि तर्सेर रुन थालेपछि जे सुकै होस भनेर कष्टम र एसएसवीले चेक गर्ने ठाउँमा पैशा दिएर उम्कीए ।”
भारतको सिम्ला देखि रुपैडिया हुदै घर फर्केका सल्यान लाम्तीका अजय देवकोटाको कहानी पनि उस्तै छ । मंगलबार बिहान साढे ५ बजे रुपैडिया झरेका देवकोटा पनि भारतीय रिक्सा चालकको पहिलो शिकार बने । झिसमिसे उज्यालोमा रुपैडियामा कता बस्ने ? बरु आप्mनो देश (नेपालगञ्ज) गैहाल्नु पर्यो भनेर रिक्सा चढेका देवकोटा पनि छोटो बाटो भन्दै रिक्सा चालककले अर्के गल्ली प्रयोग गरिरहेको बेला अन्य दुई अपर्चिित भारतियले रिक्स रोकेर ए काला पहाडि दिने भए ५ सय रुपैया दे ! नदिए तेरो ......... भन्दै धम्काए पछि एक शब्द नबोलेर भारु ३ सय दिन बाध्य भए । पुग्दा नपुग्दै रिक्साबाट ठगिएपछि निकै बिरक्तीएका उनले आप्mनो भारी बोकेरै सिमा पार गर्ने अठोट गरे ।
कपडा, भाँडावर्तन गरेर ठूलै भारी बोकेर जाँदा शुरुमै भारतीय कष्टमले कती रुपैया दिन्छस भनेर सोधेपछि उनि थप झस्कीए । अलीअली चिया खर्च दिनु पर्छ भन्ने थाहा पाएको बताएका उनले भने “शुरुमा नेपाली ५० निकालेर दिए तर उल्टै गाली खानु प¥यो । पिठ्यूको भारी नबिसाएर उभिएकै अवस्थामा भारतीय सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीले खल्तीमा हात हाल्न थाले । खल्तीमा ५ हजार भन्दा बढी रुपैया थियो । सबै पैशा लिएपछि घरपुग्न बेखर्ची हुनुपर्ने थियो । खल्तीमा हात हाल्न नदिएर फेरी सयको नोट निकालेर दिएपछि बल्ल जा भन्ने शब्द आयो अनि भागे ।” भारतीय सिमानामा ३ ठाउँमा गरी साढे ५ सय नेपाली तिरेका उनले नेपाली सिमानामा भने ६० रुप्रयाँ मात्रै तिर्नु प¥यो । भारतीय व्यवहार देखि निकै आजित भएर नेपाली सिमाना पुग्दा स्वर्ग पुगेको महसुश गरेको बताएका उनले नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई सर मलाई थकाइलाग्यो जान दिनु न ! भनेपछि चिया खर्च मागेकाले आफूले नेपाली ६० रुपैया दिएको बताए ।
जुम्लाका भण्डारी, दैलेखका विक र सल्यानका देवकोटा त सिमानामा ठगिने प्रतिनिधी पात्र मात्रै हुन् । नेपालीको महान चार्ड बडादशैंमा घर फर्किनेको लामो लर्को भएसँगै पश्चिम नेपाल र छिमेकी देश भारतको नाका रुपैडियामा हरेक दिन भित्रिने प्राय नेपाली कामदार यसरी नै ठगिने गरेका छन् । दशैको मौकापारी लामो समय पछि घरको भेटघाटमा आउने नेपालीसँग केही बढी पैशा हुने भएकाले पनि नेपाली कामदार सिमा क्षेत्रमा गठीको शिकार बन्ने गरेको कोटजहारी ९ रुकुमका ५६ वर्षिय खड्के बोहरा बताउँछन ।
भारतको कुल्लुमुष्नाली जिल्लाबाट आएका बोहराका अनुशार जो गाउँका जस्ता देखिन्छन उनीहरुबाट भारत र नेपाली तर्फका सुरक्षाकर्मीले १ सय ५० देखि ५ सयसम्म असुल्ने गरेका छन् ।
भारतीय पक्षले एक जना कामदार बाट ५ सय देखि १ हजार सम्म लिने गरेको चालक श्याम चौधरीले बताए । भारु नोट भएमा नेपाल लिन पाउदैन भन्ने आरोप लगाएर पनि उनहिरु यात्रु ठग्ने गर्छन । एसएसवी, कष्टम देखि बाहिरका केटाहरुपनि यात्रु लुट्ने धाउन्यमा हुन्छन् भने यात्रु ठग्न नेपाली प्रहरी र भन्सारका कर्मचारी पनि पछी पर्दैनन् ।
हरेक याुत्रलबाट नेपाली पक्षबाट पनि १० देखि सामान हेरेर ५ सय सम्म लिने गरिएको एक यात्रुले बताए । नेपाली पक्षबाट भारतिय पक्षले जस्तो सास्ती नदिएपनि सामान चेकजाँज गर्दा रकम माग्ने प्रचलन दशै नजिकिदैं गर्दा झन बढ्दै गएको एक रिक्सा चालकले जानकारी दिए । नेपाली तर्फको भन्सार र सुरक्षाकर्मीले सामानको परिणाम र मान्छेको अनुहार हेरेर चिया खर्च माग्ने गरेको भारतको रुरु क्षेत्रबाट फर्किएका जाजरकोटका विष्णु नेपालीले अन्नपूर्णलाई बताए । तर यात्रुहरु सिमानामा नेपाली र भारतीय पक्षबाट लुटिएको बारेमा जमुनाह सिमा प्रहरी चौकीले भने घुमाउरो तरिकाले इन्कार गरेको छ । भारतीय सिमानामा केही लुटपाट हुने गरेको भएपनि जेपाली सिमाना भने आफूले अहिलेसम्म त्यस्तो खबर नपाएको जमुनाह सिमा प्रहरी चौकीका इनिष्पेक्टर प्रमोद क्षेत्रीले जानकारी दिए ।
नेपाल फर्किने होस् वा भारत जाने जुन कुनै पनि यात्रु ठगिए वा केही समस्यामा परे सिमानामा यात्रु सहायता कक्षा स्थापना गरेको बताएका इनिष्पेक्टर क्षेत्रीले भने “हामी सदैव यात्रुलाई मर्का नपरोस भनेर लागीरहेका छौं, तरपनि भारतीय भूमिमा केही यात्रु ठगिने गरेको खबर पाएका छौं । ठगिएको विवरण यात्रु आफैले यात्रु सहायता कक्षमा नबताइदिंदा यस्तो घटना हुन गएको हो ।
जमुनाह सिमा प्रहरी चौकीमा आए (असार महिना) यता रुपैडियामा यात्रु लुटपाटका ७ वटा घटना मात्रै भएको बताएका क्षेत्रीले भारतीय सिमा प्रहरी वल (एसएसपी) सँग मिलेर २ जनाको रकम फिर्ता गराएको, २ जनालाई बाँके प्रहरीमा सार्वजनिक मुद्धा चलाएको र ३ जना पक्राउ गर्न नसकेको बताए । भारतका विभिन्न शहरबाट रेल र बस राती पुग्ने गरेकाले पनि यात्रु थप ठगिएको सिमा प्रहरी चौकीको अनुमान छ । रातीको समयमा प्रहरी जान नसक्न्ने र अँध्यारोमा भारतीय रिक्सा चालकले अन्य व्यक्ती परिचालन गरेर नेपाली यात्रु लुट्ने गरेको इनिष्पेक्टर क्षेत्रीको बुझाई छ । नेपाली सुरक्षा टोली समक्ष यात्रुले जानकारी नगराएका कारणपनि यो विषय दुई देशका स्थानीय सुरक्षा अधिकारीको वैठकमा गम्भीर विष्याका रुपमा प्रवेश नपाएको स्थानीय अधिकारीले बताए ।
दशै र तिहारको अवसरमा हरेक दिन १ हजार ८ को दरले नेपाल भित्रिने गरेको तत्थ्यांक सिमा प्रहरी चौकी जमुनाह सँग छ । यत्रो संख्यामा आउने यात्रुमध्ये प्राय कुनै नकुनै ढंगले भारतिय वा नेपाली पक्षबाट ठगिने गरेको लामो समय रुपैडिया र नेपालगञ्ज रुटका रिक्सा चालक शशिराम विकले बताए । अन्नपूर्णसँग कुरागर्दै चालक विकले भने “दिउँसोपनि रुपैडियाबाट हामीले नेपाली यात्रु रिक्सामा हालेर ल्याएका हुन्छौ । सिमानामा पुगेको शुरुमै भारतीय कष्टम र एसएसवीले नेपालीलाई निकै अश्लिल र अपशब्द बोल्छन् । उस्तै परे लाठी हिकौउन समेत पछि पर्दैनन् । त्यसरी डराएका नेपाली कामदार खल्तीबाट पैश झिकेर दिन बाध्य हुन्छन् । त्यसमा हामीले केही बोली फेरी रिक्स आवत जावतमै प्रतिबन्ध लाग्छ ।”
प्रकाशित मिति: मगलवार, आश्विन ३०, २०७५, ०९:१०:००